Maxamed Mursi oo si degdeg ah loo aasay, maalin kadib geeridiisii (sawiro) – Radio Daljir
Juunyo 18, 2019 7:29 b 0
Madaxwaynihii ugu horeeyey ee doorasho xor ah ku guulaysta Masar Maxamed Mursi ayaa lagu aasay deegaanka Madintaat Nasr oo katirsan magaalada Qaahira, iyadoo ay ka qaybgaleen xubno qoyskiisa ka mid ah, sida uu sheegay wiilkiisa.
Waxaa la’ aasay maanta oo Talaado ah, maalin kadib geeridii lama filaanka ahayd ee ku timid xilli maxkamaddiisa loo fadhiyay.
Aaskiisa ayaa waxaa subaxnimadii maanta ka qaybgalay xubno sare oo katirsan xisbigiisa Ikhwaanul Muslimiinka Masar, sida uu bogiisa Facebooka ku daabacay wiilkiisa Axmed Mursi.
Waxaa uu intaasi ku daray aaska inuu dhacay iyadoo dowladda ay diiday in lagu aaso gobolka Sharqiya deegaankiisa Nile Delta oo uu kasoo jeeday Maxamed Mursi.
“Waxaanu dhaqnay jirkiisa oo aan ku dhaqnay isbitaalka xabsiga Tora, waxaana lagu dukaday salaaddii Janaazada oo ay dujiyeen xubnaha Ikhwaanul Muslimiinka ” ayuu Axmed sheegay.
Madaxa hay’adda Human Rights Watch ee Bariga Dhexe iyo Afrika ayaa xalay bogeeda Twitterka ku sheegtay in marxumka uu wajahay dawo la’aan, isagoo qabay xanuunka storke iyo xanuunka macaanka, waxaana sidoo kalle aad u yarayd booqashada qoyskiisa ee xabsiga oo ay dowladda xakamaysay.
Mursi ayaa ku guulaystay doorashadii 2012kii dhacday, sanad kadib kacdoonkii guga carabta ee xukunka looga tuuray xukunkii sodonka sano ee madaxwaynihii ka horeeyey Xusni Mubaarak.
Militariga ayaa ka tuuray xukunka bishii July 2013kii, iyadoo dibadbaxyo waawayn looga soo horjeestay oo uu hogaaminayay madaxwaynaha xiligaan ee Masar Cabdil Fitaax Al-sisi, isagoona si degdeg ah loo xiray wixii markaasi kadambeeyey tan iyo geeridiisii shalay uu ahaa maxbuus.
Sheeko Gaaban: Guuldarro Jacayl God ma loo Galaa! (Taxanaha 44aad – maqal & muuqaal)